Ny olan'ny faharatsiana eto amin'ity izao tontolo izao ity - Worldwide Church of God Switzerland
haino aman-jery > Journal succession > 2017-01 mpandimby ny Magazine > Ny olan'ny faharatsiana eto amin'ity izao tontolo izao ity
Maro ny antony mahatonga ny olona hiala amin’ny finoana an’Andriamanitra. Ny antony iray misongadina dia ny “ny olan’ny faharatsiana” — izay nofaritan’ilay teolojiana Peter Kreeft ho “fitsapana lehibe indrindra amin’ny finoana, fakam-panahy lehibe indrindra amin’ny tsy finoana”. Matetika ny agnostika sy ny tsy mino an'Andriamanitra no mampiasa ny olan'ny faharatsiana ho tohan-kevitr'izy ireo hamafy fisalasalana na handà ny fisian'Andriamanitra. Milaza izy ireo fa ny fiarahan’ny ratsy sy Andriamanitra dia tsy azo inoana (araka ny agnostika) na tsy azo atao (araka ny tsy mino an’Andriamanitra). Avy tamin’ny andron’ilay filozofa grika atao hoe Epicurus (eo ho eo amin’ny 300 T.K.) ny fanjohian-kevitra momba an’ity fanambarana manaraka ity. Noraisin'ny filozofa Scottish David Hume izy io tamin'ny faran'ny taonjato faha-18.
Ity ny fanambarana:
»Raha sitrapon'Andriamanitra ny hisoroka ny ratsy fa tsy afaka: dia tsy hita izany. Na tsy vitany, fa tsy ny sitrapony: tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Raha samy mihatra dia afaka atao ary te-hisoroka izany: avy aiza ny ratsy? Ary raha tsy azo ampiharina, tsy vonona na tsy mahavita: nahoana isika no hiantso azy hoe Andriamanitra? »
Nanao sarin’Andriamanitra i Epicurus sy Hume tatỳ aoriana, izay tsy mifanitsy aminy mihitsy. Tsy manana toerana ampy aho eto hahazoana valiny feno (theodicie no iantsoan'ny teolojiana azy). Saingy tiako marihina maika fa tsy afaka manomboka misy akory io rojom-panoherana io ho fanoherana ny fisian'Andriamanitra. Araka ny nasongadin’ireo kristiana mpiaro ny zon’olombelona maro (ireo teolojiana izay miresaka momba ny “fanamarinana” ara-tsiansa sy ny fiarovana ny foto-pinoan’ny finoana, ny apôlôgy dia manondro ny fisian’ny faharatsiana eto amin’izao tontolo izao kokoa, fa tsy manohitra ny fisian’Andriamanitra. Te-hiditra amin'ny antsipiriany bebe kokoa aho izao.
Ny ratsy no mamaritra ny tsara
Ny fanambarana fa ny faharatsiana dia manatrika eo amin'izao tontolo izao dia manaporofo fa toy ny sabatra roa lela izay manelaka ny agnostika sy tsy mino an'Andriamanitra. Mba tohanohezana fa ny fisian'ny ratsy dia manimba ny fisian'Andriamanitra, ilaina ny manaiky ny fisian'ny faharatsiana. Manaraka izany fa tsy maintsy misy ny lalàna môraly tanteraka izay mamaritra ny ratsy ho ratsy. Tsy afaka mamorona hevitra lojika momba ny faharatsiana ny olona raha tsy manohitra ny lalàna ambony indrindra. Mahatonga antsika ho voan'ny olana goavana izany satria mampametra-panontaniana ny niandohan'ity lalàna ity. Amin'ny teny hafa, raha ny ratsy no mifanohitra amin'ny tsara, ahoana no hamaritana ny tsara? Ary avy aiza ny fahatakarana an'izany hevitra izany?
Das 1. Ny Bokin’i Mosesy dia mampianatra antsika fa tsara ny famoronana izao tontolo izao fa tsy ratsy. Mitantara ny fahalavoan’ny olombelona koa anefa izy io, izay nateraky ny faharatsiana sy nahatonga ny faharatsiana. Noho ny faharatsiana, ity tontolo ity dia tsy ny tsara indrindra amin'ny tontolo rehetra azo atao. Noho izany, ny olan’ny faharatsiana dia mampiseho mazava ny fialana amin’ny “araka ny tokony ho izy”. Na izany aza, raha tsy araka ny tokony ho izy ny zava-drehetra, dia tsy maintsy misy a. Raha misy izany dia tsy maintsy misy drafitra, drafitra ary tanjona transcendental mba hahatongavana amin'izany fanjakana heverina. Izany indray kosa dia midika ho zava-manan'aina iray (Andriamanitra) izay tompon'ity drafitra ity. Raha tsy misy Andriamanitra, dia tsy misy fomba tokony hisy ny zava-drehetra, ary noho izany dia tsy hisy ny ratsy. Mety ho sahiran-tsaina ihany izany rehetra izany, saingy tsy izany. Fehin-kevitra lojika novolavolaina tsara io.
Samy tsara sy diso ny nifanatrika
Noraisin'ny CS Lewis io lozika io. Ao amin'ny bokiny Pardon, I Christian dia ampahafantariny antsika fa tsy mino an'Andriamanitra izy, indrindra noho ny fisian'ny ratsy, ny habibiana sy ny tsy rariny eto amin'izao tontolo izao. Saingy arakaraka ny nieritreretany ny tsy finoan'izy ireo dia vao mainka niaiky izy fa ny famaritana ny tsy fahamarinana dia miankina amin'ny fomba fijery tanteraka. Ny lalàna dia manendry olona marina izay mijoro eo ambonin'ny maha-olombelona ary manana fahefana hamorona zava-misy noforonina ary hametraka lalàna mifehy ao.
Fanampin’izany, tsapany fa tsy avy amin’Andriamanitra Mpamorona ny niandohan’ny faharatsiana, fa avy amin’ireo zavaboary izay nilefitra tamin’ny fakam-panahy tsy natoky an’Andriamanitra ka nifidy ny hanota. Nahatsapa koa i Lewis fa rehefa loharanon’ny tsara sy ny ratsy ny olona, ​​dia tsy afaka ny ho tanjona ny olombelona satria mety hiova izy ireo. Nanatsoaka hevitra ihany koa izy fa ny vondron’olona iray dia afaka mitsara ny hafa raha nanao zavatra tsara na ratsy izy ireo, fa ny vondrona hafa kosa dia afaka manohitra izany amin’ny dikan’ny hoe tsara sy ratsy. Ny fanontaniana àry dia hoe inona no fahefana ao ambadik’ireny dikan-teny mifanipaka ny tsara sy ny ratsy ireny? Aiza ny norme objectif rehefa misy zavatra heverina ho tsy azo ekena amin'ny kolontsaina iray nefa heverina ho azo atao amin'ny hafa? Hitantsika manerana izao tontolo izao ity olana ity, matetika (indrisy) amin'ny anaran'ny fivavahana na firehan-kevitra hafa.
Mbola mijanona izany: raha tsy misy ny mpamorona sy mpanao lalàna momba ny fitondran-tena, dia tsy misy fepetra raisina ho an'ny tsara. Raha tsy misy fitsipika manara-penitra ho an'ny tsara, ahoana no ahalalan'ny olona iray fa tsara? I Lewis dia naneho izany: »Raha tsy misy hazavana ao amin'izao rehetra izao ary noho izany tsy misy zavaboary manana maso, dia tsy ho fantatsika hoe maizina izany. Ny teny hoe maizina dia tsy misy dikany amintsika. »
Ilay Andriamanitra antsika manokana sy tsara dia mandresy ny ratsy
Raha tsy misy Andriamanitra tsara sy tsara manohitra ny ratsy dia tsy misy dikany ny fiampangana ny ratsy na ny fiantsoana asa. Raha tsy misy andriamanitra toy izany dia tsy afaka mivadika aminy ny olona. Tsy misy fototry ny fomba fijery iray izay mihoatra noho ny antsointsika hoe tsara sy ratsy. Tsy hisy zavatra hafa ankoatry ny zavatra ankafizinay hahatongavana miaraka amin'ny marika "tsara"; na izany aza, raha nifanohitra tamin'ny filan'ny olon-kafa izany dia hataonay hoe "ratsy na ratsy". Amin'ny toe-javatra toy izany, tsy misy na inona na inona azo antsoina hoe ratsy; tsy misy mimenomenona sady tsy mitaraina ny momba azy. Tsotra ny toe-javatra misy azy ireo; afaka miantso azy ireo izay tianao.
Aminy amin'ny finoana an'Andriamanitra tsara sy tsara ihany no tena hananantsika fototra hanaiky ny ratsy ary afaka mitodika any "olona" ho ringana. Ny finoana fa misy ny tena olana eto amin ny ratsy ary ho voavaha ny andro iray ary hozahana ny zavatra rehetra izay miorina tsara amin ny finoana misy fa misy Andriamanitra manokana sy tsara.
Na dia maharitra aza ny faharatsiana, dia momba antsika Andriamanitra ary manana fanantenana isika
Misy ny ratsy - jereo ihany ny vaovao. Efa niaina ratsy isika rehetra ary fantatsika ny voka-dratsy manimba. Fantatsika ihany koa anefa fa tsy avelan'Andriamanitra hanohy ny toetrantsika latsaka. Ao amin'ny lahatsoratra iray teo aloha dia nanondro aho fa tsy nahagaga an'Andriamanitra ny fianjantsika. Tsy voatery nandray ny plan B izy satria efa nametraka ny tetika handriany ny ratsy ary ity drafitra ity dia i Jesosy Kristy ary ny fampihavanana. Tao amin'i Kristy dia nandresy ny ratsy Andriamanitra tamin'ny alàny ny fitiavany marina; Io drafitra io dia efa nipetraka hatry ny nanorenana izao tontolo izao. Ny hazo fijaliana sy fitsanganan'i Jesosy dia mampiseho amintsika fa ny ratsy dia tsy hanana ny teny farany. Noho ny asan'Andriamanitra ao amin'i Kristy, dia tsy misy fanantenana ny ratsy.
Moa ve ianao maniry an’Andriamanitra izay mahita ny ratsy, izay mandray ny andraikiny amin’izany amin’ny fahasoavany, izay manolo-tena hanao zavatra momba izany, ary hanamboatra ny zava-drehetra amin’ny farany? Koa manana vaovao tsara ho anareo aho, dia ilay Andriamanitra naseho an'i Jesosy Kristy. Na dia ao amin’ny “izao tontolo izao ratsy ankehitriny” aza isika (Galatianina 1,4Araka ny nosoratan’i Paoly, dia tsy nafoin’Andriamanitra na namela antsika tsy hanana fanantenana. Manome toky antsika rehetra Andriamanitra fa momba antsika Izy; efa niditra tao anatin’izao fiainana izao sy ankehitriny izao izy ka manome antsika ny fitahiana amin’ny fandraisana ny “voaloham-bokatra” (Romana). 8,23) momba ny “izao tontolo izao ho avy” (Lioka 18,30) - “fampanantenana” (Efes 1,13-14) ny hatsaram-pon’Andriamanitra amin’izay ho eo ambany fanapahany amin’ny fahafenoan’ny fanjakany.
Amin’ny alalan’ny fahasoavan’Andriamanitra dia ampiharintsika ankehitriny ny famantarana ny fanjakan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny fiainantsika miaraka amin’ny fiangonana. Ny Andriamanitra telo izay iray izay mitoetra ao anatintsika dia manome fahafahana antsika sahady mba hiaina zavatra iray momba ny fiaraha-monina izay efa nomaniny ho antsika hatramin’ny voalohany. Ao anatin’ny fiombonana amin’Andriamanitra sy amin’ny hafa dia hisy fifaliana – tena fiainana tsy misy fiafarana ary tsy misy faharatsiana. Eny, samy manana ny adin’ny voninahitra isika rehetra, kanefa mampahery antsika ny mahafantatra fa momba antsika Andriamanitra – mitoetra ao amintsika mandrakizay amin’ny alalan’i Kristy ny fitiavany – amin’ny alalan’ny teniny sy ny fanahiny. Hoy ny Soratra Masina: “Izay ao anatinareo dia lehibe noho izay ao amin’izao tontolo izao.” (1. Johannes 4,4).
nataon'i Joseph Tkack